Powder sira Sodium Sodium Tianeptine manta (30123-17-2) Mpanamboatra - Phcoker
Ny siramamy vita amin'ny siramamy vita amin 'ny Tianeptine (30123-17-2)
Ny vovo-tsiranoka siranoka Tianeptine dia fitambaran'ny tricyclic, mpanamora ny fisafidianana 5-HT (serotonin; sc-201146) fandraisana vitro….
Ny siramamy vita amin'ny siramamy vita avy amin'ny Tianeptine (30123-17-2)
Product Name Rano siran-kira vita amin'ny siramamy vita amin'ny tianeptine
Anarana simika Tianptine sodium; Tondraka sodium Tianptine; 30123-17-2; Stablon; Coaxil;
molekiolan'ny Formula C21H24ClN2NaO4S
molekiolan'ny Wvalo 458.93
mitsonika Point 1800C
vayma- Point 609.2 ° C amin'ny 760 mmHg
Storage Temperature Afaho amin'ny RT
Application Ny siramamy siranika avy amin'ny Tianeptine dia sira ao Tianeptine.
Tianeptine dia antidepresse.
Ny siramamy siramamy vita amin 'ny Tianeptine (30123-17-2) Description
Ny salt sodium Tianeptine dia sira ao Tianeptine. Tianeptine, fitambarana tricyclique, dia fanamafisana ny 5-HT (serotonin; sc-201146) fitrandrahana vitro sy in vivo. Ankoatr'izay, Tianeptine dia nitatitra fa hanao fihenam-bidy amin'ny fikarakarana dopamine ary mitovy amin'ny amineptine. Tsy misy fiantraikany amin'ny fihoaram-peo monoamine ny tianintine. Ao amin'ny fanadihadiana mampiasa synaptosomes voadio avy amin'ny atidoha, dia nitatitra ny Tianeptine mba hanatsarana ny fikarakarana serotonine amin'ny faritra voafantina. Ireo synaptosome madio no noraisina tamin'ny raty ary nidiran-doha tamin'ny tritium-aseho 5-HT sy Tianeptine in vitro. Ireo synaptosomes dia nodinihina tamin'ny famoahana sy famoahana ny 5-HT tamin'ny alalan'ny counter scintillation.
Ny siramamy sira-dite vita amin'ny Tianeptine dia karazana antidepressantsy mitaiza samihafa, indrindra amin'ny rafitra glutamatergic.It dia manavatsa ny glutamate ary mamolavola ny asan'ny receptor AMPA.Tianeptine koa dia manao agonist ny receptor μ-opioid (EC50s = 194 ary 641 nM ho an'ny mpanome ny olombelona sy ny mouse). Tena mahomby toy ny fluoxetine amin'ny fitantanana ny aretin'ny tebiteby.
Ny siran'ny sitroka Tianeptine dia manana fahaiza-manao nootropic raha ny momba ireo olona izay voan'ny aretin-tsaina sy tsy mahay manatsara ny fifantohany sy ny fifantohana amin'ireo olona tsy dia misy sahirana koa ny fahalalana azy.
Ny siran-tsolon'ny sotrokotrin'ny Tianeptine (30123-17-2) Mechanism of Action
Ny fanadihadiana vao haingana dia manambara fa ny tianeptine dia miasa amin'ny agonista feno ao amin'ny receptor opioid (MOR). Tianeptine dia nanohitra ny fomba fijerin'ny monoaminergika ny fahaketrahana, ary koa ireo rafitra monoaminergika be mpahalala, izay nohazavaina ny hetsik'ireo antidepressantsana malaza. Raha ny tena izy, ity medikaly ity dia heverina fa hanova tanteraka ny glutamate receptor bursting ny hippocampal CA3 sendikaly ara-sosialy iraisana. Ny fikarohana ankehitriny dia maneho fa ny tianeptine dia mamokatra ny fiantraikan'ny antidepressanta amin'ny alàlan'ny fanodinana ny hetsiky ny glutamate (ohatra, ny mpitsabo AMPA sy ny mpitsabo NMDA) ary misy fiantraikany amin'ny famoahana ny fototaratry ny neurotrophic (BDNF), izay manimba ny plastika. Ny fianarana vao haingana no manohana ny anjara asan'ny tianeptine amin'ny fampihenana ny asa atao glutaminergique ao amygdala, ny faritra ara-pihetseham-po amin'ny ati-doha mifandray amin'ny fahatsiarovana.
Ny tianteptine dia mampihena ny valin'ny hypothalamique-pitabatabaka-adrenaly amin'ny fihenjanana, ka manakana ny olana mifandraika amin'ny fihenjanana. Ao amin'ny totozy, ny fihenan'ny fihenan'ny fihenjanana dia mampitombo avo lenta amin'ny glutamate ao amin'ny amygdala basolateral ny vokatra izay voasakan'ny tianptine. Tsara homarihina fa nitombo ny glutamate antsalaka avoakan'ny glutamate ao amin'ny amygdala basolateral, na inona na inona toe-piainana amin'ny toetr'andro, ny fluoxetine SSRI. Ireo tahirin-kevitra ireo dia mampiseho fa ny fiasan'ny action Tianeptine dia miavaka amin'ny SSRI ary manohana ny fisainana fa ny hetsiky ny fihetsika of tianeptine dia mifandraika amin'ny fanovana ny glutaminergic activity ao amygdala sy ny hippocampus.
Ankoatr'ireo rafitra voalaza etsy ambony ireo, ny tianteptine dia fitsaboana tsy manam-pahaizana manokana sy fanafody anxiolytika izay mamporisika ny fikarakarana ny serotonine (5-hydroxytryptamine, 5-HT), ary ny asidra 5-hydroxyindoleacetic (5-HIAA) ao amin'ny vatan'ny atidoha.
soa of Tondra-sira sodium tianeptine (30123-17-2)
Ny salt sodium Tianeptine dia afaka miteraka aretina goavam-be.
Ny sira sitrika Tianeptine dia manana toetra anti-tebiteby sy antidepressant ary ary nootropic.
Ny salt sodium Tianeptine dia manatsara ny toe-piainana ary manatsara ny toe-tsaina.
Ny salt siramamy avy amin'ny tianeptine dia afaka manakana ny fanafihana mahery vaika tsy hitranga.
Ny siraitina misy siramamy ao Tianeptine dia miteraka fanaintainana amin'ny fibromyalgia.
Sira sodina Tianeptine ampiasaina amin'ny fitsaboana ny fahaketrahana amin'ny lehilahy manana ffunctionana.
Ny salt sodium Tianeptine dia manana fahalemena ho an'ny ADHD.
Ny salt sodium Tianeptine koa dia mampiroborobo ny neuroplasticity.
soso-kevitra Tondraka sodium siranina (30123-17-2) Dosage
Tianeptine Sodium dia manana antsasak'adiny fohy momba ny 2.5 ora14, ary mila fepetra roa mandritra ny andro. Ny dosage ny tianptine dia ny 12.5 mg dia naka intelo isan'andro, noho ny totalin'ny 37.5mg isan'andro.
Aza mihoatra ny 50mg amin'ny Tianeptine Sodium amin'ny andro iray. Ny fanaovana izany dia afaka manokatra ny varavarana ho an'ny fanararaotana bebe kokoa sy ny fiankinan-doha.
Side effects ny siramamy sodium Tianeptine (30123-17-2)
Ny vovo-tsiranoka siranoka Tianeptine dia mifandray amin'ny faritra maro amin'ny ati-doha, ao anatin'izany ireo mpandray ny opiod, izay afaka mamorona ny voka-dratsin'ny euforia. Ny voka-dratsy ateraky ny fahita matetika dia misy ireto manaraka ireto:
▲ Headache (hatramin'ny 18%)
▲ Tandroka (hatramin'ny 10%)
▲ Loharanom-pahazotoana alina / alina (hatramin'ny 20%)
▲ Fahantrana (hatramin'ny 10%)
▲ Volo maina (hatramin'ny 20%)
Ny voka-dratsy hafa dia misy ny zavatra toy ny fitohanana, fisaleboleboana, fanahiana na fahamamoana amin'ny atiny. Ny ahiahy mafy kokoa dia ny fisintahana aorian'ny fanararaotana ary tombanana ho 0.1 - 0.3% amin'ireo mpampiasa no hanana an'io olana io. Amin'ny fomba ahoana, araka ny hitanao, ny voka-dratsin'ny tsiranoka sodium Tianeptine dia hiankina amin'ny biokimia manokana sy manokana.
Tsara ny manamarika fa:
Ny marary efa zokiolona dia tokony haka fanafody kely amin'ny siranan'i Tianeptine, toy ny marary amin'ny tsy fahombiazan'ny voa. Ny dosage dia tsy mila ampifanarahana amin'ny marary amin'ny fisotroan-drongony na ny fahasimban'ny hepatita, na ny marary amin'ny dialyse. Raha toa ny Antidepressants, toy ny tianeptine, dia nitombo ny tahan'ny fisotroan-toaka.